Izimpahla Ezizenzekelayo Ezizimele, Imoto Yokuhlanza Imoto Wholesale | I-OPS
Isungulwe e-2007, sineminyaka eminingi yomlando embonini yokunakekela izimoto. I-Zhejiang OPS Environmental Protection Technology Co, Ltd ngumkhiqizi omkhulu wamakhompiyutha wazo zonke izinhlobo ze-Auto Imininingwane Imininingwane Supplies, njengefreyimu yokuwasha imoto, yokuhlanza isondo lemoto, ifomula yokushayela imoto yokugeza, Imikhiqizo yokuhlanza engaphakathi, amaphilisi e-washi we-Windhield, wonke ugesi washer washer fluid, kanye nokunye. Sitholakala eZhejiang, nokutholakala kalula kwezokuhamba.
Yonke imikhiqizo yethu inegunya lobunikazi futhi ihambisane nezindinganiso zekhwalithi zomhlaba jikelele futhi iyaziswa kakhulu ezimakethe ezihlukahlukene zasekhaya nasemaphandleni. Sibheke phambili ekusunguleni ubudlelwano obuhle bebhizinisi nabaningi emhlabeni jikelele esikhathini esizayo esiseduze ..
Ihlanganisa ukuthuthukiswa nokukhiqiza endlini
Ihlanganisa amakhono aphezulu obuchwepheshe, isebenzisa abasebenzi abanolwazi lobuchwepheshe nokuphatha. Sithuthukise ubuchwepheshe bokukhiqiza nemishini yokukhiqiza.
Ukuphathwa kwekhwalithi ephelele
Izakhiwo zethu ezihlomele kahle kanye nokulawulwa kwekhwalithi enhle kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele.
Ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside namanye amaklayenti
Ngenxa yemikhiqizo yethu yekhwalithi kanye nenkonzo yamakhasimende evelele, sithole inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba jikelele efinyelela eVietnam, eSingapore, eMalaysia, eKazakhstan, eU.SA, njll.
Siqinisekisa wonke umkhiqizo ngentengo enhle kakhulu nekhwalithi yokungenisa ngqo kusuka efektri yethu, qinisekisa izimpahla eziqinisekisiwe. Ngiyabonga nonke ngokungeseka!
Ukulethwa okusheshayo kanye nensizakalo emva kokudayiswa kokunethezeka
Inkampani yethu ibheka "izintengo ezifanele, isikhathi sokukhiqiza esiphuthumayo kanye nensizakalo enhle emva kokuthengisa" njengomgomo wethu. Sithemba ukubambisana namakhasimende angaphezulu ngokuthuthukiswa kokubili kanye nezinzuzo.
Plant and Office yethu
Ama-OPS akha ithimba lokuthengisa eliqeqeshiwe ngenhloso "yezintshisekelo zamakhasimende kuqala",
ukugxila ekuxazululeni izinkinga ezihlukahlukene zokudayiswa ngaphambi kokudayiswa, ukudayiswa kanye nokudayiswa.
Imikhiqizo yethu ibe sesikhundleni esiphambili emikhiqizo efanayo yasekhaya,
futhi zamukelwa kahle ezimakethe zomhlaba wonke. I-OPS inamathele "emoyeni ohloswe ngabantu, ochwepheshe futhi owenza umsebenzi" webhizinisi, enobuchwepheshe, othembekile, eliphezulu, isevisi elula.
Ukuphathwa Okunamandla Kwekhwalithi
Izinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso
Unentshisekelo kwimikhiqizo yethu ye-eco?
Siphonsa umugqa namuhla ukuze uthole ukucaphuna kwamahhala!